ချစ်ခြင်းတရား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ချစ်ခြင်းတရား
Posted by ဇီဇီ on Oct 10, 2014 in Creative Writing, Relationships & Family, Society & Lifestyle | 56 comments
အဖိုး ပြောတာလေး သွား အမှတ်ရတယ်။
ကျနော် တို့ အမျိုးက ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ပြသနာတွေ သိပ်များတာ။
ငယ်တုန်းကတည်းက ဘယ်သူမေးမေး ဖြေရတာ…
မဖြေမချင်း ကလေးတွေကို ဇွတ်မေးကြတာရယ်။
“ဘယ်သူ နဲ့ ဘယ်သူ မှာ ဘယ်သူ့ ပိုချစ်တုန်း” ဆိုတာမျိုးး…
“နင် က ငါ့ ကို အကြီးမ လောက် မချစ်ပါဘူး၊ သိပါတယ်” ဆိုတာ တသွယ်…
“သူ့ ကြီးကြီးကို ကြည့်ရင် ချစ်စနိုး၊ ဒီ အဒေါ်ကတော့ချဉ်ဖတ်မှန်း သိပါတယ်” တို့ အဲလိုမျိုး အချစ်ရေး ပြသနာတွေကို ငယ်ကတည်းက ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပေါ့။
ကိုယ့် မေးလို့ကတော့ မေးတဲ့ သူ အချစ်ဆုံးလို့ပဲ ဖြေတယ်။
မျက်နှာနာရတဲ့ လူ ၂ ယောက် မေးရင် ရီနေတယ်။
ရီနေလို့မရရင် ၂ ယောက်လုံးလို့ ဖြေတယ်။
၂ ယောက်လုံး လို့ ဖြေလို့ မရရင် ပိုချစ်စေချင်ရင် စားချင်တာ လိုက်ကျွေးလို့ ပြောတယ်။
ဂလိုပဲ ကြံရဖန်ရ ချောင်ချိရေးလုပ်ရတာ။
သူ တို့ တင် ပြိုင်တာမဟုတ်။ အားရင် အားသလို တစ်ယောက်ချင်းခေါ် ဘယ် မောင်ကို ပိုချစ်တုန်း မေးး၊ ဘယ် အမ ပိုချစ်တုန်းမေးး
ပြီးရင် သူတို့ဟာ သူတို့ ရီကြ ပြောကြ၊ ကိုယ်တွေမှာ အဖျော်ဖြေခံ သတ္တဝါတွေကို ဖြစ်လို့။
ကိုယ့် မောင်တွေကတော့ ယောင်္ကျားလေးတွေဆိုတော့ ဒီ အမေတွေ အဒေါ်တွေ အပိုတွေကို ဖြေရခက်၊ ငြင်းရခက် အင်မတန်ချောက်ကျဖူးကြတယ်။
“ဘယ်သူ့မှ မချစ်ဖူး” ပြောမိလို့ စိတ်ကောက်ခံရ၊ ငိုကြလို့ ပြန်ချော့ကြနဲ့ အင်မတန် ဇာတ်ရှုပ်ကြတယ်။
ဪ၊ ချစ်ခြင်း ပြသနာ!!
ဒီ ဗီဇ နှယ် ကိုယ့်မှာ ပါလာတာ။
ပိုက်ဆံ အတွက်၊ ကိုယ့် ဘဝ အာမခံချက် အတွက် အတော်လုပ်နေရတဲ့ နှစ်တွေမှာ ဆို သူတို့ ဂျီကျသမျှကို အင်မတန် စိတ်ဆိုးခဲ့ဖူးတာ။
စိတ်ထဲမလဲ ငါ့ အ ဒေါ် တွေ အ တော် အား နေ ကြ သ လား ပေါ့။
မွေးမေလေ့ ဗိုက်ခွဲမယ် ဆိုလို့ ဖုန်းထဲ ငိုမိတာကို ဟိုဘက်က အဒေါ်တွေက ငိုသတဲ့။
ဘာလို့ ငိုတုန်းဆို သူတို့ နဲ့ အတူနေချိန်သာ ပိုများတာ ကိုယ်က ကိုယ့် မွေးမေလေ့ ကို ပိုချစ်တာ မြင်ရလို့ပါတဲ့။
ဟုတ်တယ်လေ။ ဒီ လူ မွေးနေ့ဖုန်းဆက်ပြီး ဒီ လူ့ မွေးနေ့ မေ့လို့ကတော့ တစ်လ ကိုးသီတင်း ပြန်ချော့မပြီးဗျားး
စိတ်ပြေရင်တောင် သတိရတိုင်း တတိတိ ရိ တတ်သေးတာ။
လက်ဆောင် ဆိုလည်း အရောင်တောင် ကွဲလို့ မရ။
အရောင် တူ ပြန်လည်း ဘယ် သူ ကြိုက်တဲ့ အရောင် ဦးစားပေးတယ် လို့ ပိကျိပိကျိ ပြောကြသေးတာ။
ဒီ ဘက် က အခက် အခဲတွေကို မသိ ကဂျီကဂျောင်ကျတယ် လို့ လည်း မမြင်ရက်ဘူးး၊ ကိုယ် အလို လိုက်ထားတဲ့ အကျင့်တွေကိုးးး
အဲဒီလိုတွေ အလေ့အကျင့်နဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့လို့လား မသိ။
အဲ ဒီ မ ဟုတ်တဲ့ အကျင့်တွေ အကုန်ပါလာတယ်။
ဒီ အချက်တော်တော်များများကပဲ ကိုယ့် ကို ကိုယ့် ချစ်ခင်သူတစ်ချို့ နဲ့ ဝေးသွားစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေပါပဲ။
သူငယ်ချင်းတွေ ကြားရော၊ အချစ်တော်တွေကြား၊ ချစ်သူတွေကြား ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အဲဒီစိတ်နဲ့ သိပ်ခံစားခဲ့ရဘူးတာမို့…
အချစ်ခြင်းညီတဲ့ အပေါင်းအသင်း တော်တော်များများ ခုထိ လက်တွဲမဖြုတ် ကျန်ခဲ့တာလေးကိုပဲ ကျေးဇူးတင်မိတယ်။
ချစ်ရင် ချစ်သလို မကွယ်မဝှက် ပြောတတ်တာမို့ (အချစ်ဦး ကိုက လွဲရင်)
သူများတွေ ထင်ချင်ရာထင် ပြောချင်ရာပြောခံရတာလည်း ခုထိ အမှတ်သည်းခြေမရှိခဲ့ဘူးး
လူ ၂ ယောက် ကြားမှာ ချစ်ခင်ယုံကြည်မှု အမှတ် ၁၀၀ ရှိတယ် ထားပါစို့။
ကျနော် စတင် ရင်းနှီးတဲ့ သူတိုင်းကို အမှတ် ၁၀၀ စပေးပြီး မှ ချစ်ခင်မိတာမျိုးပါ။
လျော့တာ တိုးတာ ဖြစ်စေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အပြီးမှာ…
ကိုယ်နဲ့ ရင်ဘတ်ချင်း တူတယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေပဲ ကျန်ပါတယ်။
ချစ်ခင်မှုနဲ့ အတူ ယုံကြည်မှုပါ တွဲပြီး အမှတ်တိုးပေးထားတာမျိုးမှာ..
ချစ်ခင်ပြီးတဲ့ မိတ်ဆွေကို ဖြတ်တောက်ဖို့ ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မစဉ်းစားခဲ့တာမို့..
ကိုယ်တိုင်က အမှတ် ၁၀၀ လုံး လျှော့ဖို့ ဖြစ်လာတဲ့ ကိစ္စ တွေမှာ အတော် ရင်နာရပါတယ်။
စိတ်ထဲက ခံစားချက် တစ်ချို့ တစ်ဝက် ချရေးလိုက်တာ။
ဪ။ အဖိုး ပြောဖူးတာလေး ပြောဖို့ မေ့နေတယ်။
“နင်တို့ဟာလေ၊ ထမင်းစားဖို့ မပူရတိုင်း ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်း ပြသနာ သိပ်များတာပဲ,
တခြားလူ စီ က ဒီ အချစ်လောက်ရဖို့ တွေးနေတဲ့ ဟာတွေ” တဲ့။
ကိုယ် အခု ထမင်းနပ်မှန်နေလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဂိဂိ.. အချစ်​ဆုံးဖြစ်​ချင်​တဲ့ပြသနာ​လေ.. ငယ်ငယ်​က မဖြစ်​ခဲ့ဖူးဘူး.. ကြီးမှ အတ္တ​တွေများလာတာရယ်​.. ချစ်​ပါတယ်​ဆိုတဲ့ ချစ်​သူကို​တောင်​ ချစ်​လားလို့ ​မေးရတာ အခါခါ.. ဟိ
အင်း .. ချစ်ခြင်း မုန်းခြင်းဆိုတာ လူသားတိုင်း ကင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူးလေ ..
တိုက်ဆိုင်လို့ ခံစားချက်လေး နဲနဲလောက် ပြောပြချင်တယ် .. ဒီတစ်ခါတော့ ဇီဇီနဲ့ သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင်ပါတယ် ..
အမကတော့ အိမ်မှာ အရမ်းကို အချစ်ခံရတဲ့ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ် … ချစ်ခြင်းတွေ အလျှံအပါယ်ရခဲ့သူမို့လို့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်မှာ တုန်လှုပ်မှု သိပ်မရှိခဲ့ဘူး … သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ ကိုယ့်အိမ်က မိသားစုဝင်တွေလိုပဲ နွေးထွေးကြင်နာမှုနဲ့ မေတ္တာအပြည့်နဲ့ ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ် … ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကမတူဘူး .. သူတို့တွေထဲမှာ မေတ္တာငတ်တဲ့ မိသားစုထဲမှာ ကြီးခဲ့သူတွေလဲရှိတယ် … ပုံမှန်အတိုင်းကောင်းကောင်းဆက်ဆံတဲ့အပေါ်မှာ သူတို့က သာယာသွားပြီး မေတ္တာကို လောဘတက်လာတာမျိုး ခဏခဏ ကြုံခဲ့ရဖူးတယ် …
ဒီလိုပါပဲ .. တစ်ချို့ကတော့ သူတို့ပေးတဲ့ မေတ္တာနဲနဲလေးကို အများကြီးလို့ ထင်နေတာမျိုးလဲရှိတယ် ..
ကိုယ့်ဘက်ကတော့ ဘယ်သောအခါမှ မေတ္တာမပျက်ခဲ့ဘူး ..
ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲဆိုတော့ .. ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ အသွားအပြန်ရှိပေမယ့် တူညီမှုတော့ မရှိနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ … action and reaction are not always the same depending on their background…
ခု ပိုသိလာတာ မိတ်ဆွေ၊ အပေါင်းအသင်း၊ သူငယ်ချင်း၊ ချစ်သူ တွေမှာ ချစ်ခြင်း မတူရင် ကြာရှည် ရှေ့မဆက်နိုင် ဆိုတာပဲ။
ကျနော် ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ်။
ရေရှည်ခိုင်မြဲဖို့ဆိုရင်တော့ အတ္တမပါမှဖြစ်မယ် .. အဓိကကတော့ မျှော်လင့်ချက်မထားဘူးဆိုရင် ရေရှည်သွားနိုင်ပါတယ် ..
တစ်စုံတစ်ခုကို မျှော်လင့်ပြီးချစ်ကြလို့ အဲဒီအတိုင်းဖြစ်မလာခဲ့ရင် ပြသနာတက်မှာပဲ .. ပြသနာတက်ခဲ့တဲ့အခါမှာလဲ ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့သူက အရှုံးပဲဖြစ်မှာပဲ ..
ကျနော် မဖြုတ်နိုင်သေးတဲ့ ဟာဒီ မျှော်လင့်ချက်ရယ် ဒီ အတ္တပါပဲ။
အိမ်က ချစ်တာကျတော့ အသံမထွက်ဘူးရယ်… တတွတ်တွတ် မမေးတတ် မပြောတတ်ဘူး… အလုပ်နဲ့ ပဲ ပြကြတယ်… ကျွန်တော်က အဲဒါကို အားမရဆုံးပဲ… အဲကြောင့် မိန်းမကို ဆို နေ့တိုင်း မေးတယ်.. ကိုယ်လဲ နေ့တိုင်း ဖြေတယ်… မွှားမွှား လုပ်တယ်… ဟီး… အပျိုကြီး ရှက်နေပြိလား…
လှေးတွေ မွှားတွေ သတ်တာ ရှက်စာလားး
ဟားဟား.. အပျိုကြီး လမ်းလွှဲတယ်ဗျိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး…
ချစ်ရတာလည်း မကောင်း ၊ အချစ်ခံရတာလည်း မကောင်း…
ချစ်ချင်း မုန်းချင်းကင်းသောကိုယ် ဖြစ်ရပါလို၏လို့…
ဒါပေသည့်… ကျောက်စ် ချစ်ဇနီးကိုတော့ ဘယ်အချိန်မေးမေး အခြစ်ဆုံး… ခွိ ခွိ
အချစ်ဆုံးလို့ မပြောလို့ ရမလားး
ပုထုဇဉ်သဘာဝမို့ အပြစ်မကင်းတဲ့ မျှော်လင့်ခြင်း နဲ့ ချစ်ခြင်းတွေကြားမှာ ပူလောင်ရဦးမည်…
သူက ကိုယ်မှ မဟုတ်ပဲလို့…
စကားမဆက်… အဖိုးပြောတဲ့စကားလေးက မှတ်သားစရာလေးနော်…။
ကိုယ်လည်းထမင်းနပ်မှန်နေလို့ ထင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်တတ်တဲ့စိတ်တစ်ခုကိုတော့ လျော့ချထားခဲ့တာကြာပါပြီ။
ကိုယ်ငတ်ရင် ဘယ်မှ ကပ်စားလို့ ရတာမဟုတ်။
လူ​တွေရဲ့ ချစ်​ခြင်းတရားကို သိပ်​အ​လေးထားမခံစားမိ​ပေမယ့်​.. မ​နေ့ည ​ခွေးလိမာကားကြည့်​ပြီး စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​ ငိုရတာ မျက်​လုံး​တောင်​​အောင့်​​နေတယ်​.. သများက ​ခွေးစိတ်​​ပေါက်​​နေလို့ဖြစ်​ရမယ်​ :mrgreenn:
ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး ငိုလိုငို၊ ရင်ထဲ နစ်လို့ နစ်နေ ဖြစ်နေတာ။
သူများအဲလိုဖြစ်ရင်တောင် ဟား တာ ဆိုတော့။
အရင်က ထမင်း ၃ နပ်စာ ရှာနေရလို့ နေမှာပါလေ။
ဒီ ကဘာ မှာ ယောင်္ကျားများဟာ မယုံရဆုံးးးး
လက်နက်ကြီး စကားလုံး ပလီပလာ ညာဏ်ဆင်သုံးးး
ပုလဲကြီး သီချင်း ဆို ပြတာပါ။
ရှုပ်ပါတယ် နောက်ဆို ရပင်းနဲ့မချစ်နဲ့ ရရစ်နဲ့ ခြစ် :mrgreenn:
Author – NyainAyeTun
အဆွေဟုခေါ်၍ မျက်မှောက်၌သာ အဖော်သဟဲပြုလျက် မျက်ကွယ်၌ ရန်သူလိုဖြစ်သောသူသည် ဟန်ဆောင် မိတ်ဆွေမည်သည်။ အကြင်သူသည် အကြောင်း ကိစ္စပေါ်လတ်သော် အဖော်သဟဲ ပြု၏၊ ထိုသူသည် မိဆွေစစ် မည်၏။
လောက၌ မိတ်ဆွေစစ်နှင့်ဝေး၍၊ မိတ်ဆွေတုနှင့် ပေါင်းသင်းမိက အကျိုးစီးပွား ပျက်ပြားခြင်းကို မုချ ကြုံရပေအံ့။
မိတ်ဆွေတု (၄) မျိုး။
၁။ “အညဒတ္တုဟရ” မိမိထံမှသာ လာရောက်ယူဆောင်လေ့ရှိသော မိတ်ဆွေတု။
၂။ “၀စီပရမ” နှုတ်ဖြင့်သာ လိုလားယောင်ပြုလုပ်လျက် တစ်စုံတစ်ရာ လက်မပါသော မိတ်ဆွေတု။
၃။ “အနုပ္ပိယဘာဏီ” အကြိုက်လိုက်၍ ပြောဆိုတတ်ပြီး ကွယ်ရာတွင် ရန်သူသဖွယ် ပြုတတ်သော မိတ်ဆွေတု။
၄။ “အပါယသဟာယ” ပျက်စီးကြောင်း၌သာ အပေါင်းဖော်ဖြစ်သော မိတ်ဆွေတု။
+ ၁။ အညဒတ္တုဟရ မိတ်တုအင်္ဂါ (၄) ပါး။
၂။ နည်းသောဥစ္စာကို ပေးခြင်းဖြင့် များစွာသောဥစ္စာကို အလိုရှိ၏။
၃။ မိမိဘေး ကြုံခိုက်သာ မှီခို၍ အမှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဘေးလွတ်သောအခါ ပြန်မကြည့်သတိရမှု မရှိခြင်း။
၄။ အကျိုးစီးပွားရလိုသောကြောင့် ချဉ်းကပ်ခြင်း။
+ ၂။၀စီပရမ မိတ်တုအင်္ဂါ (၄) ပါး။
၁။ လွန်ပြီးသော အကြောင်းအရာဖြင့် ချီးမြှောက်ခြင်း။
၂။ မဖြစ်သော အကြောင်းအရာဖြင့် ချီးမြှောက်ခြင်း။
၃။ အချီးအနှီး လောကွတ်ဖြင့် ချီးမြှောက်ခြင်း။
၄။ ဖြစ်ဆဲကိစ္စတို့၌ ပျက်စီးခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ ချီးမြှောက်ခြင်း။
+ ၃။ အနုပ္ပိယဘာဏီ မိတ်တုအင်္ဂါ (၄) ပါး။
၁။ မကောင်းမှု၌ တိုင်ပင်သည်ကိုလည်း ခွင့်ပြုခြင်း။
၂။ ကောင်းမှု၌ တိုင်ပင်သည်ကိုလည်း ခွင့်ပြုခြင်း။
၃။ မျက်မှောက်၌ ချီးမွမ်းစကားဆိုခြင်း။
၄။ မျက်ကွယ်၌ ကဲ့ရဲ့စကားဆိုခြင်း။
+ ၄။ အပါယသဟာယ မိတ်တုအင်္ဂါ (၄) ပါး။
၁။ သေရည်အရက် သောက်စားခြင်းတို့၌ အပေါင်းဖော်ဖြစ်၏။
၂။ အခါမဲ့သွားလာခြင်း၌ အပေါင်းအဖော် ဖြစ်၏။
၃။ ပွဲလမ်းသဘင်ပျော်ရွှင်လိုက်စားမှု၌ ပေါင်းဖော်ဖြစ်၏။
၄။ လောင်းကစားခြင်း၌ အပေါင်းဖော် ဖြစ်၏။
မိတ်စစ် မိတ်ကောင်း (၄)မျိုး။
၁။ “ဥပကာရ” ကျေးဇူးပြုတတ်သော ကောင်းသော စိတ်နှလုံးရှိသည့် မိတ်ဆွေစစ်။
၂။ “သမာနသုခဒုက္ခ” ချမ်းသာအတူ၊ ဆင်းရဲလည်းအတူဖြစ်သော ကောင်းသောစိတ်နှလုံးရှိသည့် မိတ်ဆွေစစ်။
၃။ “အတ္တက္ခာရီ” အကျိုးစီးပွားကို ပြောကြားတတ်သော ကောင်းသော စိတ်နှလုံးရှိသည့် မိတ်ဆွေစစ်။
၄။ “အနုကမ္ပက” အကျိုးစီးပွားကို အစဉ် စောင့်ရှောက်တတ်သည့် စိတ်နှလုံးကောင်း ရှိသည့် မိတ်ဆွေစစ်။
+ ၁။ ဥပကာရ မိတ်ဆွေစစ်အင်္ဂါ (၄) ပါး။
၁။ မူးယစ်နေခြင်းဖြင့် မေ့လျော့နေသော မိတ်ဆွေကို စောင့်ရှောက်တတ်၏။
၂။ မိတ်ဆွေ၏ ပစ္စည်းဥစ္စာကို စောင့်ရှောက် တတ်၏။
၃။ ကြောက်ရွံ့နေသော မိတ်ဆွေ၏ အားကိုးရာ ဖြစ်၏။
၄။ ပြုဖွယ်ကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာက အကူအညီ တောင်းခံသည်ထက် နှစ်ဆသော စည်းစိမ် အထောက်အပံ့ကို ပေးတတ်၏။
+ ၂။ သမာနသုခဒုက္ခ မိတ်ဆွေစစ် အင်္ဂါ (၄) ပါး။
၁။ လျှို့ဝှက်တတ်သောစကားကို ပြောကြား တတ်ခြင်း။
၂။ မိတ်ဆွေ၏ လျှို့ဝှက်အပ်သောအမှုကို လုံခြုံအောင် လျှို့ဝှက်ခြင်း။
၃။ ဘေးရန်ရှိသောအခါ စွန့်လွတ်၍ မသွားခြင်း။
၄။ အရေးကိစ္စကြုံလျှင် မိတ်ဆွေအတွက် အသက်ကိုသော်လည်း စွန့်လွတ်နိုင်ခြင်း။
+ ၃။ အတ္တက္ခာရီ မိတ်ဆွေစစ်အင်္ဂါ (၄) ပါး
၁။ မကောင်းမှုမှ တားမြစ်တတ်၏။
၂။ ကောင်းမှု၌ တိုက်တွန်း နှိုးဆော် တတ်၏။
၃။ မကြားဖူးသော အကြားအမြင် ဗဟုသုတ များကို ပြောကြားတတ်သည်။
၄။ နတ်ရွာ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ကောင်းသော တရားကို ပြောကြားတတ်၏။
+ ၄။ အနုကမ္ပက မိတ်ဆွေစစ်အင်္ဂါ (၄) ပါး။
၁။ မိတ်ဆွေ၏ ဆုတ်ယုတ်ပျက်စီးခြင်းကို မနှစ်သက်။
၂။ မိတ်ဆွေ၏ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းကြီးပွားခြင်းကို နှစ်သက်၏။
၃။ မိတ်ဆွေအား ကျေးဇူးမဲ့ ကဲ့ရဲ့စကား ပြောကြားသူကို ကန့်ကွက်တားမြစ်တတ်၏။
၄။ မိတ်ဆွေအား ချီးမွမ်းစကားပြောကြား သူကို ထောက်ခံတတ်၏။
ကိုယ့်အပေါ်ချည်းး မတရားး သလိုလို
Love က.. ခဏခဏကြားရတွေ့ရတာ…။
မြန်မာမှာကျ.. “ချစ်”ဆိုတာကြီးက ပြဿနာလို့ထင်တယ်..။
ချစ်ခြင်းကို.. ကိလေသာ.. ညစ်နွမ်းတဲ့.. အပြစ်တခုလို.. ပုံဖေါ်ထားတာလည်းရှိတာကိုး…။
ကိလေသာမှာ.. မိဘ..သားသမီးချစ်.. ၅၂၈လည်း ကိလေသာပဲ..။
အနောက်နိုင်ငံသားတွေတော့.. အားရင်ကွဲ နေကြတာဘဲ။
အနောက်မှာ သွားးနေ မှပဲ
အနော့ ချစ်ခြင်းးး အပြစ်ကင်းးးးတော့မယ်ထင်!!!!!
တွေ့ ဆုံ ကြုံ ကွဲ ဖြစ်မြဲ ဓမ္မတာ တဲ့
ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် နှုတ်ဆက်ခွဲခွာတာတွေလည်း ရှိနိုင်သလို
မျက်နှာချင်း မဆိုင်ချင်လောက်တဲ့အထိ ဖြစ်ပြီး ခွာပြဲတာတွေလည်း ရှိမှာပဲလေ
why so serious??? huh? :mrgreenn:
Take it easy, huh..?
လမ်းးမှာ ပြန်တွေ့ ချိန် ပြုံးးပြ နုတ်ဆက် နိုင်တဲ့ ခြေနေ အတိအကျ မှာ မိတ်ဆွေ အဖြစ်မှ ပြတ်ဆဲခြင်းးး
ပြတ် “စဲ” ခြင်း ဂျီးဒေါ်ရဲ့
မဆဲနိုင် လို့ ပြတ်
ဆဲမနာ ဆိုမနာ အဆင့် မဟုတ်ဟု မှတ်ယူလိုက် :mrgreenn:
နှစ်ယောက်စလုံး ကလည်း ချစ်တယ်
နှစ်ယောက်စလုံး ကိုလည်း ချစ်တယ် ..
ငါ့ကို ငါပဲ သတ်သေလိုက်ချင်တယ် …
ပို့စ်ဖတ်ရင်း .. ဒီသီချင်း သတိရသွားလို့ …
ချစ်တာတော့ကောင်းဘာဒယ် ဒါပေမယ့်.. ဘယ်လိုလယ်ဗယ်(၅၂၈~၁၅၀၀)မှာပဲဖစ်ဖစ် အစွန်းရောက်အချစ်ဆိုရင်တော့ တအားအရုပ်ဆိုးဘာဒယ်
မုန်းစရာ ရွံစရာ နာကျည်းစရာတွေတောင်ဖစ်လာဘာဒယ်
သြော် အချစ် အချစ်
ကျုပ် ချစ် တူမလေး Post မှာ ရေးချင်တာတွေ များနေပါရောလား။
ဇီဇီ ကို အရီး ချစ်တာ အကြောင်းမဲ့ မဟုတ်။
အကြောင်းရှိလို့ အကျိုးပေါ်ပြီး ချစ်တာ။
ဒီလောက် ရွာ ကို အကျိုးပြု နေမှတော့ ချစ်ဖို့ကိုကောင်းနေရောလေ။
အမှန် ကတော့ ချစ်တာ ထက် သံယောဇဉ် ဆိုတာက လူနှစ်ယောက် ကို ပိုမြဲ စေတာပါ။
သံယောဇဉ် ဆိုတာက အတူတူ နေတာကြာလာချိန် စိတ်တူသဘောတူ ဖြစ်လာပြီး တွယ်သွားတာ လို့ ထင်တာဘဲ။
စိတ်မတူရင်၊ မညှိနိုင်ရင် ခဏနေပြီး အကြောင်းလဲ သိရော ကွဲ ရောလေ။
ချစ်ခြင်း ဆိုတာက လူတွေ ကို ခဏတာ ဖျားယောင်းပြီး သာယာမှုပေးရုံ ပါဘဲ။
တကယ်တော့ ချစ်ခြင်း ဆိုတာမှာ တစ်ခြား စကားလုံး တွေ အားမဖြည့် ဘဲ မခိုင်မြဲပါဘူး။
အဖိုး ပြောတဲ့ အတိုင်းဘဲ ဗိုက်ဆာရင် အချစ်ဆိုတာ ပျောက်ပါတယ်။
သံယောဇဉ် နဲ့ ညှာတာ စာနာစိတ် ဆိုတာ ရှိနေခဲ့ရင် ဗိုက်ဆာလဲ လက်တွဲခိုင်နေဆဲဘဲ။
lol:-)) :)) :)) :))
တို့ သူကြီး များ စကားလုံး ကြွယ် တော့ လဲ ကြွယ် လို့။
မကြွယ်တော့ လဲ မကြွယ်လို့။
စဉ်းစားဦး မယ်။ lol:-))
ဒီမယ် ကြည့် သူကြီး
English meaning မှာလဲ Love ဆိုတာလဲ သူချည်းဘဲ မဟုတ်။
Love isavariety of different feelings, states, and attitudes that ranges from interpersonal affection (“I love my mother”) to pleasure (“I loved that meal”).
It can also beavirtue representing human kindness, compassion, and affection—”the unselfish loyal and benevolent concern for the good of another”.
It may also describe compassionate and affectionate actions towards other humans, one’s self or animals.
kinship or familiarity (in Greek, storge),
sexual and/or romantic desire (eros), and
self-emptying or divine love (agape).
Modern authors have distinguished further varieties of romantic love.
Non-Western traditions have also distinguished variants or symbioses of these states.
ဂျပန်စကားမှာလည်း.. အိုက်(ai) က… ချစ်တာဆိုပေမယ့်… စုံတွဲတွေ..
ai ထက်စာရင်.. စုကိ(suki) အသုံးပြုကြတယ်…
တစ်ချို့အချစ်ကတော့ လက်တွဲနေမှမဟုတ်ပဲ တစ်သက်လုံးချစ်နေနိုင်တာမျိုးလဲရှိပါတယ် ..
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်မတွဲနိုင် အတူမနေနိုင်ပေမယ့် အဝေးကနေပဲ သတိရနေ၊ ချစ်နေလို့ရတယ် ..
မယုံမရှိနဲ့ ကိုယ်တွေ့ ..
သများလဲ ဝင် အားဖြည့်ချင်လို့။
ပြောချင်တာတွေ အများးကြီးး မြင်ရလားး အရီးးး
မျိုသိပ်လိုက်တာမို့ ကွင်းးဆက်ပြတ်သွားး တယ်
ဝေ ရယ် အရီးးရယ် နားးလည်တာ ကျေးးကျေးးပါ
သားသမီးတွေချစ်ရတာကိုက အတော်ပူလောင်သား :mrgreenn:
ဝေ ပြော တာ ထောက်ခံတယ်
မီးး ဆိုတော့ လည်း လောင်တာပေါ့
ပြာအုံးးနေတာတောင် ပူသေးးတာ ပဲ
အင်းချွိပြောတဲ့ဒုတ်ခတွေခံစားဖူးလို့ကြောက်တယ်။ တန်းတူဖြစ်အောင်ကျိုးစားရင်း တန်းတူမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမတော့ တက်လိုက်တဲ့ပြသနာ အခုတော့ သေခန်းပါပြတ်ပါကောလား။ အချစ်နဲ့ပါတ်သက်လို့ကတော့ သိပ်အများကြီးပြောဇာတော့မရှိဘူးရယ် :mrgreen:အချစ်ဆိုတာထက် နားလည်မှု့နဲ့သံယောဇဉ်ကိုပိုလိုချင်မိတယ်
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ ဖြစ်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။ ကလျာဏမိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်တော့ သူ့ဘ၀နဲ့သူ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ်ပါ။ ဘ၀နှစ်ခုကို တစ်ခုဖြစ်အောင် ပေါင်းလို့ မရပါဘူး။ ရတယ်လို့ ယုံရင် လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ မကြာခင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နဖားကြိုး ထိုးလိမ့်မယ်။
“နင်က ငါ့အကြိုက်အတိုင်း နေ၊ ငါက နင့်အကြိုက်အတိုင်း နေမယ်။ အဲဒါဆို နင်လည်း လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ ငါလည်း လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ မရတော့ဘူး။ နင်မရှိရင် ငါ နေလို့မဖြစ်ဘူး။ ငါ မရှိရင် နင် နေလို့ မဖြစ်ဘူး။” အဲဒီလို ဘယ်သူမှ မလွတ်လပ်အောင် နေတဲ့ နေနည်းကို စီစဉ်ထားကြတယ်။
တကယ်တော့လည်း ဘယ်သူ့အကြိုက်မှ ဘယ်သူ မနေနိုင်ပါဘူး။ သူများအကြိုက်နေတယ် ဆိုတာ ပါးစပ်ပြောပါ။ တစ်ယောက်အကြိုက် တစ်ယောက်မလိုက်နိုင်လို့ ပြဿနာတွေများ၊ စကားတွေများ၊ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မကျေမနပ်တွေ ဖြစ်နေကြတာ။ မဖြစ်နိုင်တာကြီးကို မျှော်လင့်နေတာ။ စိတ်ကူးယဉ်နေတာ။ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း အရှိကို အရှိအတိုင်း ပြောရရင် – ရာနှုန်းပြည့် တစ်ယောက်အကြိုက် တစ်ယောက် မလိုက်နိုင်ပါဘူး။ တခါတလေ နည်းနည်းလောက်တော့ အလိုလိုက်တာ ရှိမယ်။
အဲဒီတော့…..စိတ်ဆင်းရဲအောင် တမင်တကာ မလုပ်ဘူး။ တတ်နိုင်တာကို တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ပေးမယ်။ ဒါပေမဲ့ လွတ်လပ်မှု အများဆုံးရှိအောင် နေမယ်။ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်အကြိုက်အတိုင်း နေရမယ်လို့ မမျှော်လင့်ဘူး။ မတောင်းဆိုဘူး။ ကိုယ့်ဘ၀သံသရာခရီးကို ကိုယ် သွားနေတာ။ အကြောင်းရှိလို့ ဒီဘ၀မှာ လာပြီး ဆုံမိကြတယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့ အကောင်းဆုံးစိတ်ထားတွေ အရည်အချင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာအောင် တစ်ယောက် အကူအညီပေးမယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မပိုင်ဘူး။ အနိုင်ယူရမယ့်သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ သူ့စိတ်ကူးနဲ့ သူ့ဘ၀ကို သူ ကျေနပ်အောင်နေ၊ ကိုယ့်စိတ်ကူးနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်ကျေနပ်အောင်နေမယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အရိုးသားဆုံး ဆက်ဆံမယ်။ မလှည့်စားဘူး။ ဒါဆို တော်လောက်ပါပြီ။ သိပ်ကျေနပ်စရာ ကောင်းပြီ။
ဟီး..ကောင်းလှချည်လားလို့ ဖတ်နေတာ..အောက်က ကွင်းလေးထဲကတွေ့သွားတယ်…။
ကိုယ့်ကို ကြည့်ပြောသလား မှတ်ရ။
ဟုတ်တယ်နော်…မတတ်ပါ့ကိုလည်း ပြောနေသလိုပဲ..အတူတူပဲ …
မဇီ ဆရာတော်ပြောသလို နေနော်။
ကိစ္စ တစ်ခု တိုင်း တစ်ခု တိုင်း
နေတတ်အောင် အချိန်ယူရင်းနဲ့ သက်တမ်း ကုန်တော့မယ်ထင်ရဲ့ကွယ်။
လက်ထပ်တယ်ဆိုတာက.. ကာမပိုင်(အပြန်အလှန်)ဆိုတာကို စာချုပ်နဲ့သဘောတူညီမျှမှု တခုထားတာပဲ..
မူလအခြေခံကတော့.. ကိုယ့်ကာမ.. ကိုယ်သာပိုင်…။
ဒါကြောင့်.. ယူအက်စ်မှာ.. အိမ်ထောင်ဖက်ကို သဘောမတူ.. အတင်းအကြပ်ကာမဆက်ဆံရင်လည်း.. မုဒိန်းမှုမြောက်သလို… အိမ်ထောင်ဖက်က.. အပြင်မှာကဲတာကို.. ပါတနာကမသိရင်..(သို့) သဘောတူရင်.. ဘာမှမဖြစ်.. ။
သိရင်..သဘောမတူရင် . စာချုပ်သဘောတူညီမှုကို ဖေါက်ဖျက်တယ်ဆိုတာနဲ့.. တရားစွဲလို့ရ…
ဒမှာ မိတ်ဆွေ ကိစ္စ ပြောနေတာကို ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ။
လာလာ မြှောက်ပေးနေသလို ပဲ။
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာရော တရားစွဲလို့ ရလားးမသိ။
တရားစွဲရင်ရော ဘယ်သူ့ကို စွဲရလဲ။
သာဒ် ပါစင် ကို စွဲရတာလား မသိ။
ခါတလေ စာချုပ်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ဘယ် အရာ ကို ယုံရမယ် မသိဘူးး
ဘယ်အရာကမှ စိတ်မချရဘူးလို့ ပဲ ထင်နေ။
အသက်ကြီး directly propotional to အဆိုးမြင်ဖြစ်လာ